I-HP Specter 13 kunye ne-HP Specter x360, iilaptops ezinesiphelo esiphakamileyo esitsha esibhityileyo | Iindaba zeGajethi
UMntla Merika I-HP isungule iilaptops ezintsha eziphezulu. Ngaphezu koko, sinokuthi ziilaptops ezimbini ezinobukhulu obungaphantsi komndilili kwaye ezingagqithiyo kwii-intshi ze-13,3. Oko kukuthi, sinokujamelana nezinye iindlela ezimbini kwicandelo ultrabook.
Iimodeli ezintsha zezi I-HP Specter 13 kunye ne-HP Specter x360, ukuba zimbini iindlela ezinamandla kakhulu kunye neempawu ezifanayo- azifani. Ukongeza, inkampani iye yafuna ukumilisela ezi khompyuter ngeetshipsi ezintsha ze-Intel, isizukulwana sesibhozo ukuyinika ukubamba kwangoku. Kodwa makhe sihlolisise zombini iimodeli kwaye ubone ukuba zisinika ntoni.
3 Ukufumaneka kunye nexabiso leemodeli zombini
I-intshi eyi-13.3 enesisombululo esipheleleyo se-HD kunye nemidlalo emininzi
Inkqubo I-7 GHz Intel Core i8550 1.8U (4 GHz Turbo Boost)
Imemori ye-RAM 8 GB ebhodini
Ikhadi lemifanekiso I-Intel UMD Graphics 620 ene-4GB yeVRAM
Ukugcina 256 GB SSD
Unxibelelwano 2 x I-Thunderbolt 3/1 i-USB-C / ijack yeaudiyo
Ibhetri Iiseli ezi-4 (43.7 Whr) ukuya kuthi ga kwiiyure ezili-11 zokuzimela
Ixabiso Ukuqala kwi- $ 1.299.99
Eyokuqala kweemodeli ezimbini ze-HP yi-HP Specter 13. Eli qela onokulufumana zombini ezimhlophe namnyamaLiqela elixhotyiswe kakhulu. Ngoku, into yokuqala eya kuthi ibambe ingqalelo yakho kukubhitya (ngaphezulu nje kwesentimitha enye) kunye nekhibhodi efanelekileyo, ebuyiselwe umva ukukunceda ukuba uchwetheze kwimiboniso ekhanyayo.
Kwakhona, isikrini sayo sokuchukumisa okuninzi, sifikelela kwifayile ye- 13,3 intshi idiagonal yesayizi. Isisombululo sayo yi-HD epheleleyo (i-1.920 x 1.080 pixels) kwaye inikezela ngepaneli yeGlasi yeGorilla enganyangekiyo. Ukongeza, kwenziwe iinzame zokunciphisa isakhelo sesikrini kangangoko kunokwenzeka, ke imvakalelo yokuba phambi kwescreen esikhudlwana nayo iyanda.
Okwangoku, ngaphakathi kwe-HP ibingafuni kuyidlala kwaye ikhethe ukudibanisa iiprosesa zamva nje kwintengiso. Koko kukuthi, I-HP Specter 13 ine-Intel Core i7 yesizukulwane se-8 nge frequency yokusebenza ye-1,8 GHz. Nangona usebenzisa umsebenzi we "Turbo Boost" ukuba isantya sewotshi sinokuba yi-4 GHz.
Le chip ihamba kunye 8GB RAM. I-welding kwi-plate, ngoko umsebenzisi akanakho ukufikelela kuyo kwaye, ngoko ke, akayi kukwazi ukwandisa eli nani. Ngokumalunga nenxalenye yokugcina, i-HP Specter 13 iqulethe Idrayivu eyi-256GB ye-SSD, eya kukuvumela ukuba usebenze usetyenziso-kwaye uqalise i-OS-ngokukhawuleza.
Xa kuziwa kunxibelelwano, i-HP Specter 13 inee-Thunderbolt 3 ezichwebeni ezininzi, i-USB Type-C kunye ne-headphone / microphone combo jack. Isandi sisayinwe nguBang & Olufsen kwaye inezithethi ezibini. Okokugqibela, ibhetri yayo ithembisa uluhlu lokufikelela kwiiyure ezili-11 zomsebenzi.
I-intshi ye-13.3 ngesisombululo se-4K (3.840 x 2.160 pixels)
Inkqubo 7 GHz Intel Core i8550 1.8U (4 GHz ngeTurbo Boost)
Imemori ye-RAM 16 GB ebhodini
Ukugcina I-512 GB kwi-SSD
Unxibelelwano 2 x I-Thunderbolt 3/1 i-USB-C / iMicrosoftSD slot / i-audio jack
Ibhetri Iiseli ezi-3 (60 Whr) ukuya kuthi ga kwiiyure ezili-8 zokuzimela
extra usiba olubandakanyiweyo kwiphakheji
Ixabiso Ukuqala kwi- $ 1.199.99
Kwelinye icala, ukhetho lwesibini i-HP esinika lona yi-HP Specter x360. Olu khetho lunefom eyahlukileyo kunomzalwana walo wekhathalogu kuba inalo Idabi lokugoqa iidigri ezingama-360. Oko kukuthi, sijamelene nokuguqulwa kwepotifoliyo. Kwakhona, ubungakanani bayo bekhusi zii-intshi ze-13,3. Kwaye, ingqalelo: isisombululo sayo yi4K (Iiphikseli ezingama-3.840 x 2.160). Okwangoku, ngaphakathi siza kuba neprosesa efanayo kunye nomntakwabo: Isizukulwana se-7th Intel core i8.
Ngoku kule nguqulo Inkumbulo ye-RAM inyuka iye kwi-16 GB, nangona iyakudityaniswa ipleyiti. Ukugcinwa kwayo kusekwe kwifayile ye- Ukuqhuba kwe-512GB SSD kwaye inika isithuba seMicrosoftSD, into engafakwanga kwimodeli eqhelekileyo. Olunye utshintsho kule modeli sisandi sayo: siya kuba nenkqubo ye- Izithethi ezi-4 Ityikitywe nguBang & Olufsen kwaye ikhibhodi yayo iphinde yangasemva.
Ukongeza kunxibelelwano olufanayo nolomntakwabo, kule meko isitayile siyongezwa kwipakethe yentengiso oza kusebenza kamnandi ngayo ngexesha lokufunda okanye ngexesha leentlanganiso. Kwaye kunjalo Ungasebenzisa i-HP Specter x360 njengencwadi yokubhalela ukuya kwenza izichazi. Ngoku, kolu hlobo ubukhulu be-1,3 yeesentimitha kwaye ubunzima bayo ziikhilogram eziyi-1,2. Nangona kunjalo, yenye yezona zincinci kwaye zinobunzima obuncinci kwintengiso.
Okokugqibela, ibhetri ye-HP Specter x360 inesikhundla esiphezulu kune-HP Specter 13 (iiseli ezi-3 ezine-60 Whr) kunye Ukuzimela kwayo ziiyure ezisi-8 ngokusetyenziswa okuxubeneyo, ngokweedatha ezivela kwinkampani uqobo.
Ukufumaneka kunye nexabiso leemodeli zombini
Omabini la maqela azakufumaneka ukusukela kule nyanga ka-Okthobha. Kwaye ngakumbi ngakumbi: iya kuthengiswa ngomhla olandelayo 29. Zombini iikhompyuter zisebenza phantsi Windows 10 Ikhaya kunye namaxabiso zezi zilandelayo:
HP Specter 13: Ukuqala kwi- $ 1.299,99
HP Spectre x360: Ukuqala kwi- $ 1.199,99
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » I-HP Specter 13 kunye ne-HP Specter x360, iilaptops eziphezulu eziphezulu ezinokubhitya okungathethekiyo
Icandelo le-Android Wear liyanyamalala kwivenkile kaGoogle
I-Wiko View Prime icetywayo njengexabiso eliphantsi kuyo yonke enye isikrini